Jaceyl Dhab Ah - Shan qodob ku Dareen sii Xaaskaaga Jaceyl Dhab Ah
SHAN QODOB KU DAREEN SII XAASKAAGA JACEYL DHAB AH.
Ragga badigooda waxaa ku adag iney fahmaan waxa ay rabto Xaaskooda. Ogoow Gabadha waxey ka rabtaa mar walba Ninkeeda inuu Dareensiiyo Xasilooni, Jaceyl iyo Kalsooni ay Farxadi ku dheehan tahay.
Amaanta iyo Hadalada Macaan uu Ninkeeda ku yiraahdo waxey ka Caawisaan iney ku iloowdo dhibaatooyinka ay Nolosha kala kulmeyso.
War Ninyahow Aniga waxaan ku leeyahay mar kastaba Xaaskaaga dareen sii Jaceyl Dhab Ah.
Hadaba sidee ku dareen sii kartaa xaaskaaga Jaceyl Dhab ah?
1- Dareensii iney tahay Saaxiibadaada dhabta ah oo aaney jirin Cid kale oo aad u sheegatid Sirtaada iyo Farxadaada.
2- Dareensii inaad Caawinaadeeda u baahan tahay, Isla markaasna Tus inaad Had iyo jeer u Debacsan tahay Dhankeeda.
3- Dareensii Nolol Farxadeed oon ka marneyn Romantic, sida: Dhunkashada ama Adiga oo ku Seexda Dhabteeda ama Adigoo Hab siiya oo aad Laabta gelisid. (Ogoow Daqiiqad keliya oo aad Laabta gelisid, iyada waxey kaga Qiimo badan tahay Wax kastoo Dunida Guudkeeda saaran).
4- Bar dhegaheeda iney mar kasta kaa maqlaan Hadalada macaan ee Laabteeda Daawada u ah, isla markaasna dareensiinaya Xasilooni iyo Farxad Qalbigeeda.
5- U muuji Naxariis Adigoo eegaaya sida ay Hooyo, Aabe iyo Dhammaan Reerkooda ay uga soo Go'day jaceylka ay Adiga kuu qabto dartiis.
Ogoow, Haddeey intaasi kaa hesho, weligeeda kaa Ag dhaqaaqin meyso.